स्नातक उत्तीर्ण युवतीको करामत : एकातिर सम्वन्ध विच्छेद, अर्कोतिर विवाह गरेको २८ दिनमा सन्तानको जन्म ! – ebaglung.com
२०७५ जेष्ठ ९, बुधबार २०:४९	Footer Slider, Home Slider, Top News, थप समाचार
गुल्मी जिल्ला अदालतमा सम्वन्ध विच्छेदको चाङ, ६० वर्षिया बृद्धको यस्तो चर्तिकला !
श्रीमान विदेशबाट काठमाडौं झरेकै दिन, दुधे छोरी छाडेर लाखौं नगद र गर गहना सहित बेपत्ता !
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ जेठ ९ । जिल्ला अदालत गुल्मीमा गत साउन महिना देखि पछिल्लो ६ महिनाको अन्तरालमा परेका कुल मुाहरु मध्ये झण्डै आधा जस्तो मुद्दाहरु सम्वन्ध विच्छेदका रहेका छन् । सो अदालतकी रजिष्ट्रेशन तथा प्रशासन फाँट प्रमुख ना.सु. सीता घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा परेका कुल २ सय ६४ मुद्दाहरु मध्ये १ सय २१ वटा मुद्दा सम्वन्ध विच्छेदका रहेका छन् । सम्वन्ध विच्छेद गर्ने महिलाहरुको उमेर बढि मात्रमा बिसबाईसे रहेको छ ।
सम्वन्ध विच्छेदको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगार रहेको छ । कोही अर्कासंग गई सके पछि पनि सम्वन्ध विच्छेद गर्न आएका छन् । श्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद वस्यालका अनुसार अन्तरजातिय विवाह गरेर विष वर्ष देखि अलपत्र एक दलित महिलालाई अदालतले २० वर्ष पछि २० लाख क्षतिपुर्ति भराएर न्याय दिलाएको छ ।
अर्का एक पुरुषले विवाह गरेको चार पाँच वर्ष सम्म पनि श्रीमती मन नपराएर अर्को विवाह गर्नका लागि २० लाख रुपैयाँ गोजी भराई गरेर सम्वन्ध विच्छेद गरेका छन् । यी दुई रकम यस आर्थिक वर्षका सवै भन्दा बढि हो । पछिल्लो चरण एक महिलाले एक पैसा नलिई सम्वन्ध विच्छेद गरेकी छन् ।
अदालतको पुरै सयंन्त्रले विना अंशपात संवन्ध विच्छेद नगर्नुहोस भन्दा पनि नमानेर यो संग बस्नु भन्दा जोगी बन्छु भन्दै आवेगमा आई सम्वन्ध विच्छेद गरेकी उनि अहिले सदरमुकाम तम्घासमा रुँदै अन्यायमा परे भन्दै हिडेकी छन् । एउटी साठी वर्षिया हजुर आमाको चर्तिकलाले उनको परिवार र अदालत समेत चकित परेको श्रेस्तेदार वस्याल बताउँछन् ।
६० वर्षिया हजुर आमाको यस्तो चर्तिकला
एकल महिला रहेकी ६० वर्षिय गुल्मीकी ती बृद्धा घरबाट बृद्धाश्रम बस्न जान्छु भनेर हिडिन । घरबाट छोरा छोरी र नाती नातिनाले फोन गरेर सोद्धा पनि बृद्धाश्रम मै छु भनिन । पछि खोज्दै जाँदा उनि अर्कै संग टाप कसेको परिवारजनले पत्तो पाए । दोश्रो विवाह त गरिन तर त्यहाँ उनलाई सोचे जस्तो भएन । नाती नातिनाले मन फर्काई दिए । उनको पालो अदालतमा दोश्रो पति संग सम्वन्ध विच्छेद गरी पुनः पुरानै घर फर्केकी छन् ।
विवाहको २८ दिनमा सन्तान लाभ, ‘सेक्स’ बन्यो दुध र भात
अदालत भन्दा बाहिर एक स्नातक उत्तीर्ण युवतीले एकातिर सम्वन्ध विच्छेद र अर्कोतिर विवाह गरेको २८ दिनमा सन्तानको जन्म दिएकी छन् । पुर्व श्रीमान संग खासै राम्रो सम्वन्ध नभएको बताउने उनले संगको उक्त सन्तान कता पट्टिको जन्माईन भन्ने अझै खुलेको छैन् ।
उता श्रीमान काठमाडौ उत्रदै गर्दा यता घरमा श्रीमती बेपत्ता
विदेशबाट श्रीमति प्रतिको माया र सम्झना मनमा सल्वलाउँदै काठमाण्डौ आई पुगेका छिमेकी जिल्ला पाल्पाका एक युवा श्रीमतिलाई थप सर समानहरु किन्नमा ब्यस्त थिए । तर यता श्रीमति भने श्रीमान काठमाण्डौं आएको थाह पाउन साथ सुनका गहना , कपडा लत्ता र पैसा लिएर घरबाट एकाएक बेपत्ता भएकी छन् ।
थाहा छैन उनकी आमको खै कता ‘बबाल’ छ । यो सव वैध/अवैध वालै फरर शारीरिक सम्वन्ध चलाऔ सरर… हरुले समाजलाई दिएको कडा चुनौती हो । चुनौती त दिएका छन तर शारीरिक सम्वन्ध दुध र भात जस्तै ठान्ने र पछि त्यही दुध र भात विष संगै कालो रात बने पछि मात्र ती ६० वर्षिया हजुर आमालाई जस्तै चेत पस्ने देखिन्छ ।